Degso Antivirus Barnaamijyada loogu talagalay Windows
Degso Antivirus Barnaamijyada
Kaspersky Anti-Virus 2017 waa mid ka mid ah barnaamijyada antivirus-ka ugufiican ee loo heli karo dadka isticmaala Windows PC maanta, iyadoo hanjabaadaha internetka ay sii kordhayaan. Waxay si joogto ah u baareysaa nidaamka si looga ilaaliyo fayrasyada ugu dambeeya, trojans, malware iyo hanjabaadaha kale, xitaa markaad marinaysid...
Emsisoft Anti-Malware waa barnaamij si wax ku ool ah kaaga ilaalin kara barnaamijyada xun. Cusbooneysiinta joogtada ah ee keydka macluumaadka waxay ka dhigan tahay inay aqoonsan karto furin cusub sida ugu dhaqsaha badan. Thanks to Emsisoft Anti-Malware, oo baareysa dhamaan codsiyada ka shaqeeya asalka sida softiweerka antivirus isla...
Carifred waxay ku soo jiidanaysaa feejignaan qalabkeeda fudud laakiin waxtar u leh Windows, waxayna qabataa shaqo la mid ah waxayna ka caawisaa kumbuyuutarrada dalab loo yaqaan Ultra Adware Killer. Codsigani wuxuu kaa caawinayaa inaad ka saarto barnaamijkaaga Adware ee waxyeeleeya kombiyuutarkaaga. Haddii ay koonto kale ku jiraan...
AdwCleaner waa xalka amniga oo awood badan oo horumarsan oo ka ilaaliya isticmaalayaasha kumbuyuutarka barnaamijyada xun ee ku wareegaya internetka. Haddii aadan u isticmaalin wax barnaamij antivirus ah kombiyuutaradaada, waxaa waxtar leh inaad iskaankaaga ka baarto kombiyuutarkaaga wixii malware ah adoo iskaasaar ka helaya AdwCleaner...
360 Total Security waa softiweer antivirus ah oo dadka isticmaala siiya difaac buuxa oo fayras ah kombiyuutarkooda, oo ay weheliyaan astaamo dheeri ah oo dheeri ah sida dardargelinta kumbuyuutarka iyo faylalka qashinka. Waxaad ka heli kartaa nooca ugu sarreeya ee 360 ​​Wadarta Amniga adoo adeegsanaya xiriirka hoose. 360 Wadarta Amniga...
GridinSoft Anti-Malware waa barnaamij ka saarista fayraska oo aad isticmaali karto haddii kombiyuutarkaaga uu soo weeraray software xun. Inta aan ku dhex feyneyno internetka, waxaan soo dejisan karnaa faylal kala duwan oo waxaan gujin karnaa xiriirro kala duwan. Mararka qaarkood, waxaan ku wareejin karnaa faylasha annagoo gelineyna...
Avast Premium Security waa barnaamij amni oo horumarsan kaasoo siiya ilaalinta ugu badan kombiyuutarkaaga, taleefankaaga iyo kiniinigaaga. In ka badan kaliya antivirus, Avast Premium Security wuxuu siiyaa ilaalin buuxda oo khadka tooska ah dhammaan desktop -kaaga iyo aaladaha mobilada. Wax alla wixii aalad ah ee aad isticmaasho, Windows...
Xidhmada Amniga Internet -ka ee Emsisoft waa nidaam ilaalin badan oo aad isticmaali karto si aad kombiyuutarkaaga uga ilaaliso fayrasyada una hubiso amnigaaga internetka. Isku -darka astaamaha dab -damiska iyo fayraska, barnaamijku wuxuu hubiyaa isku -xirnaanta gudaha iyo dibedda intarneedka iyo furin. Xidhmada Amniga Internetka ee...
ESET NOD32 Antivirus 2021 waa barnaamij horumarsan oo kahortaga kana hortaga jabsadayaasha, madaxfurashada iyo been abuurka. Waxay ka soocdaa barnaamijyada kale ee antivirus ee dhaqameed taas oo ka ilaalinaysa dhammaan noocyada khayaanada, oo ay ka mid yihiin fayrasyada, dirxiga, spyware, ransomware, waxayna ilaalisaa ilaalinta waqtiga...
Xirmada Degdegga ah ee Emsisoft waa xirmo nabadgelyo oo gabi ahaanba bilaash ah oo aad sidato markasta. Marka ay dhibaato ka haysato kombiyuutarkaaga ama marka saaxiibku kaa codsado in lagaa caawiyo softiweer xaasidnimo ah oo waxyeelleeya kombiyuutarkooda, waxaad kaxaysan kartaa Qalabka Degdegga ah ee Emsisoft oo degdeg ugu tag...
Waxaad awoodi doontaa inaad ku ilaaliso kombiyuutarkaaga iyo xogtaada iskaanka waqtiga-dhabta ah, waxaa mahad iska leh Avira Antivirus Pro, oo bixisa difaac xirfadeed oo ka dhan ah dhammaan khataraha kharribaya dhadhankaaga adigoo nidaamka ka galaya internetka. Avira Antivirus Pro, oo leh astaamaheeda la soo saaray gaar ahaan...
Comodo Hijack Cleaner, softiweer aad u adeegsan karto inaad iskaga ilaaliso xayeysiiska cudurka qaba ama waxyaabaha kale ee laga furay daalacashada internetka, waxay gacan ka geysaneysaa waxqabadkaaga iyo amnigaaga adigoo dhowraya nidaamkaaga. Taageerida Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Comodo Dragon iyo Comodo Ice...
Zemana AntiMalware waxay kombiyuutarka ku baareysaa lix daqiiqo gudahood, iyadoo lagu ogaanayo lagana saarayo khayaanada. Barnaamijka, oo shaqeynaya iyada oo aan la rakibin, wuxuu ogaadaa dhammaan softiweerka sida rootkits, trojans, bots, fayrasyada, gooryaanka, spyware iyo adware. Baadhitaanka mashiinka shan barnaamij oo antivirus kala...
TrojanHunter waa barnaamij fayras ka saaris ah oo kaa caawinaya inaad fayrasyada ka saarto adigoo kombiyuutarradaada ka baaraya malware. TrojanHunter wuxuu la yimaadaa interface fudud oo la fahmi karo. Kuma talin karno barnaamijkan inuu yahay xal dhammaystiran oo antivirus ah; maxaa yeelay TrojanHunter waa aalad loogu talagalay in lagu...
Maamulaha Tencent PC waa barnaamij ka hortaga fayraska oo dadka isticmaala siiya aalad si fudud loo isticmaali karo oo loogu talagalay kahortaga fayraska. Barnaamijkan antivirus-ka bilaashka ah, oo leh hawl rakibid fudud, waa aalad aad isticmaali karto haddii aad rabto inaad ka hortagto fayrasyada soo galaya kombuyuutarkaaga. Trojans,...
Qalabka Ka -saarista Junkware waa codsi waxtar leh oo la isku halleyn karo oo kombiyuutarkaaga ka baaraya khayaanada, Adware -ka, baararka qalabka iyo barnaamijyada kale ee waxyeellada leh. Ka sokow noqoshada barnaamijka ka saarista furin, barnaamijka, kaas oo sidoo kale ka saari kara softiweerka ku dhegan biraawsarkaaga oo aad u...
Panda Cloud Cleaner waa barnaamij antivirus si fudud loo isticmaali karo oo internetka ka baaraya softiweerka iyo fayrasyada waxyeeli kara kombuyuutarkaaga, taasna waxaa ugu wacan teknoolojiyada casriga ah ee daruuraha. Qalabka Panda Cloud Cleaner, waxaad si fudud ku ogaan kartaa oo ku nadiifin kartaa xitaa barnaamijyada xun ee...
Barnaamijka IObit Malware Fighter Free wuxuu ka mid yahay xulashooyinka bilaashka ah ee isticmaalayaasha doonaya inay ka difaacaan kumbuyuutarkooda hanjabaadaha malware ay rabaan inay yeeshaan, waxaana dhihi karaa inay tahay mid ka mid ah codsiyada sida ugu fiican shaqadooda u qabta. Barnaamijka, oo loo soo saaray inuu xal u noqdo...
EMCO Malware Destroyer waa barnaamij bilaash ah oo lagaa qaadayo fayraska oo aad u adeegsan karto inaad ka saarto xumaanta ku soo dhex dhuuntay kombiyuutarkaaga. Muuqaalka ugu muhiimsan ee barnaamijka waa inuu si dhakhso leh u baari karaa. Thanks to muuqaalkan, waxaad ku ogaan kartaa oo tirtiri kartaa fayrasyada nidaamkaaga ilbiriqsiyo...
Avast Ultimate waa dhammaan-hal-hal amniga, asturnaanta iyo qaybta waxqabadka ee loogu talagalay isticmaaleyaasha Windows PC. Waxay isku daraysaa 4 codsi oo qaali ah hal meel: Avast Premier, oo bixisa badbaadin ugu badan, Avast Cleanup Premium, qalab nadiifinta iyo dardargelinta aaladda, Avast SecureLine VPN, oo qarinaysa xiriirka...
Comodo Cloud Antivirus waxaa lagu qeexi karaa inuu yahay barnaamij antivirus ah oo bixiya ilaalin buuxda oo fayras ah dadka isticmaala adoo qaadanaya awooda daruurinta xisaabinta gadaasheeda. Barnaamijkan antivirus-ka ah oo aad kala soo bixi karto oo aad si bilaash ah ugu isticmaali karto kombiyuutaradaada, wuxuu isku daraa hawlgallada...
McAfee AVERT Stinger waa barnaamij fayras loo isticmaalo in lagu tirtiro qaar ka mid ah fayrasyada gaarka ah. Barnaamijku uma dhigmo barnaamij fayras, laakiin waa dhammaystir. Stinger wuxuu adeegsadaa farsamada iskaanka cusub oo la wanaajiyay. Nooca barnaamijkan wuxuu keenayaa sifooyin gaar ah iyo dayactir fayruusyada W32/Polip. Marka...
Comodo AntiVirus wuxuu si isdaba joog ah uga ilaaliyaa kumbuyuutarkaaga faafitaanka fayras ee suurtogalka ah wuxuuna sameeyaa nadiifinta marka loo baahdo. Kaliya maahan ogaanshaha iyo ka warbixinta fayrasyada, Comodo AntiVirus wuxuu la wareegayaa furin iyo barnaamijyo teknolojiyaddiisa gaarka ah. Comodo AntiVirus, oo ah barnaamij ay...
Panda Free Antivirus waa barnaamijkii ugu dambeeyay ee antivirus ee ay diyaariso shirkada Panda oo caan ku ah barnaamijyadeeda amaanka, waxaana si bilaash ah loogu siiyaa dhamaan dadka isticmaala. Barnaamijkan oo waagii hore ahaan jiray sida Panda Cloud Antivirus ayaa hada loo daabacay Panda Free Antivirus wuxuuna ka ilaalin karaa...